Karim Benzema oo si xiiso leh kaga hadlay ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2021 – Gool FM
Karim Benzema oo si xiiso leh kaga hadlay ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or 2021
Dajiye October 25, 2021
(Madrid) 25 Okt 2021. Weeraryahanka reer France iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa si xiiso leh kaga hadlay ku guuleysiga abaal-marinta Ballon d’Or ee xiddiga ugu fiican adduunka sanadka 2021-ka.
Benzema ayaa ku soo baxay liiska kama dambeysta ah musharaxiinta u sharraxan inay ku guuleystaan abaal-marinta Ballon d’Or 2021, sida ay qortay majaladda France Football, kaasoo ku guuleystaha la shaacin doono dhammaadka bisha soo aaddan.
Haddaba weeraryahanka reer France iyo kooxda Real Madrid ee Karim Benzema ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Goolasha kuma filna wax walba si loogu tartamo Ballon d’Or, haddii aad bilowdo inaad sidan u fikirto, waxaad waayi doontaa awood badan, waxa ugu muhiimsan waa in garoonka lagu soo kordhiyo arrimo farsamo, baasas fiican iyo in kubadda la xakameeyo.”
“Waxaan jeclahay kubad quruxda badan, dabcan ku guuleysiga Ballon d’Or waa mid ka mid ah riyooyinkeyga caruurnimada, waana wax fiican inaan ka mid noqdo 30-ka musharax ee u sharaxan sanadkan.”
“In aan ku guulaysto Ballon d’Or waxay ii tahay riyo sida in aan u ciyaaro Real Madrid ama aan ku guulaysto Champions League, waxaana gaaray labadii riyo ee ugu danbeeyay, waxaana doonayaa in aan gaadho tan kale.”
Axadii, Karim Benzema waxa uu ka qayb qaatay guushii Real Madrid ay kaga soo gaartay kooxda Barcelona garoonka Camp Nou, kulankii El Clasico ee la wada sugayay, kasoo ku soo idlaaday 1-2.
Chelsea, Arsenal iyo AC Milan oo ciyaaraya kulammo ka tirsan EFL Cup iyo Serie A & Saacadaha ay soo galayaan ciyaarahaas